IKingsoft Office, indlela yokuheha abasebenzisi abasha | Kusuka kuLinux
IKingsoft Office, indlela yokuheha abasebenzisi abasha
Bengivele ngikutshele a inkinga enganginayo ngaphakathi I-Kingoft Office (noma i-wps office, njengoba ufuna ukuyibiza) engiyixazulule kalula, futhi manje sekuyisikhathi sokunikeza umbono wami ngale ndlela entsha.
Ezinye zezikhalazo zamakhasimende ami ukuthi azinayo i-suite ekuphakameni kweMicrosoft Office, ngoba zibheka ukuthi isikhombimsebenzisi sesibonelo seLibreOffice siphelelwe yisikhathi kakhulu. Angivumelani impela ngoba ngicabanga ukuthi isikhombimsebenzisi seRibbon asisebenzi ngokusebenziseka kwaso ngoba sidinga ukuchofoza okuningi futhi sichitha isikhala esime kakhulu sokunambitha kwami.
Ukushiya umbono wami eceleni, kufanele kukhunjulwe ukuthi iklayenti lihlala liqinisile futhi ngalokhu i-Kingsoft Office idlala indima ebalulekile ekukholiseni amaklayenti ami ukuthi afudukele ku-GNU / Linux ngoba ayabona ukuthi lapha sinakho okudingayo.
Manje uma sikhuluma ngokuhambisana namafomethi aphethwe yiMicrosoft Office, kuyiqiniso ukuthi kungcono (kancane) kangcono kulesi sici kuneLibreOffice kepha ayifinyeleli ku 99% ukuhambisana njengoba abanye besho.
Ngibonile ngokwesibonelo endabeni yefonti eyaziwayo ye-Arial ukuthi ihluke kancane. Lokhu okungenhla akuyona inkinga enkulu; Okuyinkinga ukuthi kwezinye izikhathi, lapho kumbhalo obhalwe ku-Microsoft Office, sinekhasi, lapho ukulibuka e-Kingsoft Office sinezimbili futhi lokhu kungenzeka kungenxa yamaphikseli ihhovisi laseKingsoft elisebenzisayo ukuhlukanisa umugqa owodwa nomunye mkhulu kancane.
Esinye isici esivuna sona endabeni yokuhambisana ukuthi, ngokwesibonelo, asiwatholi la mabhokisi empunga avame ukuvela kuLibreOffice futhi afaka indawo "yesikhala" lapho sivula amafayela we-.doc noma .docx.
Zonke izinto ezimbi engikutshela zona ngehhovisi laseKingsoft yizinto ozigcina ngengilazi yokukhulisa kusukela lapho ekuboneni kuqala iklayenti licabanga ukuthi konke kuphelele futhi lelo iphuzu lokuhlanganisa. Ngamafuphi, ngibona ihhovisi laseKingsoft ngaphezulu njengendlela yokuqinisekisa amakhasimende ami, noma ngabe iChina ingecala lethu, siyethemba ukuthi izofinyelela ukuhambisana okungu-100% kungakapheli unyaka owodwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IKingsoft Office, indlela yokuheha abasebenzisi abasha
Ukukhuluma iqiniso, uhlelo lweKingsoft Office luhle impela. Njengoba kusesigabeni se-Alpha, kulula kuwe ukuthi uthole amaphutha, njengoba kimi ngine-CV yami engayihlela kuqala ku-Google Amadokhumenti, ngase-MS Office 2007, futhi ekugcineni, lapho ngifuna ukuhlela it e-Kingsoft Office, mina ngiyikhombisa ngendlela embi kakhulu. Ngamafuphi, kuyinkinga ukuxazulula.
Noma kunjalo, leli suite lehhovisi likhombisa ukuthi liqine impela yize lisezingeni elanele lokucatshangwa ukuthi lizinzile. Noma kunjalo, ngizokweseka bobabili iLibreOffice neKingston Office (eyokuqala yezinga le-.odt, neyesibili, ngenqubo ye-Microsoft Office abaningi abanqena ukuthuthela ku-GNU / Linux).
ushaye khona. Njengoba ngikutshela, ake silinde izinyanga ezingama-6 kuye kwezingu-12 ukuze ukuhambisana kube ngamaphesenti ayi-100. Akukhona ukuthi sengiyifundile kodwa nginethemba lokuthi kuleso sikhathi esedlule iChina izokwenza ibhizinisi elithile neMicrosoft ukuxazulula inkinga yokuhambisana.
UGibran barrera kusho
Ukungabaza okukodwa kuyahambisana ne-Debian 7 futhi yimuphi umehluko okhona phakathi kwehhovisi le-kingston, i-libre office 4.x ne-apache open office 4.x okungcono ngemvelo ye-Debian, ngiyibona ifana kakhulu.
Phendula uGibran Barrera
Nginombono ofanayo ne-neysonv, ngiyayithanda i-LibreOffice futhi ngiyithanda kangcono i-interface yayo. Okuwukuphela kokwehla ukusekelwa kwamafomethi we-OOXML (ukwesekwa kwefomethi kanambambili ye-MS Office 97-2003 engingathi kuhle kakhulu), okungcono ku-WPS Office, engahle ithande kakhulu abantu abathanda kakhulu i-MS Office interface, ngakho-ke ngicabanga ukuthi kuhle ukuba nale suite noma ngabe kuyimfihlo. Ukuphela kwento elahlekile ukuhunyushelwa olimini lwesiSpanish. Amafayela olimi ukuwahumusha asevele etholakala eGithub, ake sibheke ukuthi ngabe kukhona yini abantu abakhuthazwayo futhi kungekudala sizoba neHhovisi le-WPS ngeSpanishi:
Impela, mathupha iqiniso lokuthi lihunyushelwe olimini lweSpanishi lingangizuzisa kakhulu. Ngelinye ilanga bengicabanga ngenkinga yokuhumusha ngihumushe izinto ezimbili ezingenangqondo kepha lapho nginokuthile okuqinile ngiyilayisha kuphrojekthi ye-github
Ngicabange ukusiza, noma ngabe kuncane nje, kepha iqiniso ukuthi ukuhumusha kuqalwe kusuka eSpanishi kusuka ePeru futhi ngivela eSpain. Angicabangi ukuthi kunokwehluka okuningi uma kukhulunywa ngokuhumusha uhlelo, kepha angazi ukuthi kungaba ngcono yini ukufaka isandla kulokho kuhumusha osekuqalile noma ukuqala eyodwa kusuka ekuqaleni.
Ngendlela, ngikhuluma nge-interface, ngivele ngafaka iKingsoft Office ngezinhloso zokuhlola (yebo, ngiyenzile kuWindows, bengingafuni ukufaka imitapo yolwazi engama-32-bit kuKubuntu ...), futhi ngithole ukuthi isikhombimsebenzisi singashintshelwa kwisitayela sakudala! = D
EPeru, sesincike kakhulu eHhovisi kangangokuba kwathi nje lapho iKingsoft Office iphuma, saba nentshisekelo yokulihumusha.
Endabeni yami, sengivele ngisebenzisa inguqulo ye-Alpha 11 ku-PC yami ne-Debian.
Abathuthukisi beKingsoft Office bathuthukisa ukwakhiwa okungama-64-bit.
Izindaba zivela kunjiniyela uChizhong Jin.
Hawu! Hawu .. 🙂
U-Eliotime3000 ngithole enye i-Chinese Clone of Office ebizwa nge-Yozo Office ingumzala weKingsoft Office…. I-Yozo Office iyizamile kodwa ayisebenzelanga mina…. http://www.yozooffice.com/
IKingSoft Office isivele ikhiphe inguqulo yayo ye-Alpha 12 yeGNU / LINUX.
i-interface entsha incane kakhulu ku-ALPHA 12. Kuxaka kanjani ukuthi ulayishe isithombe seKingSoft Office yakudala.
Hawu isithombe-skrini sivela ku-beta 1 selokhu ngiyifakile ngokulandela lesi sifundo esivela ku-Linux http://community.wps.cn/download/ Ngiyabonga ngolwazi futhi ngizohlola i-alpha 12 ukubona ukuthi yini okunjalo yize kuyi-alpha ngicabanga ukuthi ayizinzile ngokwengeziwe. ngendlela engibona ngayo kubonakala sengathi i-alpha 12 ihlasela kakhulu i-MO 2010 no ???
Kubukeka njengehhovisi 2013 kuWindows 8. XD leyo khophi esobala
Ngikopishe naku-Office 2013.
Nikeza isizathu kusho
Kuyiqiniso, abaningi abadluleli kwi-MSOffice. Ngazi abaningi kakhulu, cishe ngifaka nami (yize sengivele ngikujwayele iLibreoffice, futhi ngicabanga ukuthi kuyindaba yalokho, ukujwayela ... Angiyena omunye walabo abakholelwa ukuthi i-MSOffice ingcono kuneLibreOffice, zehlukile nje).
Manje, mayelana nokuhambisana… .. ASIQALE UKUSEBENZISA I-ODT Esikhundleni SEDOCX XD XD XD…
Ngingaba nomona ngamathebhu e-WPSOffice. Lokho kufanele kube kuLibreOffice.
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi ngabe uhlobo olusha luthuthukise ukunikezwa kwefonti? Yilokho kuphela okubi engikutholile, uma umbhalo ungafundeki kahle kunzima kimi ukuthi ngisebenze ... akusikho ukuthi awukwazi ukufundwa kepha akuhambelani nokucaca kweLO noma ezinye izinhlelo zokusebenza. (Ngisebenzisa Ubuntu 13.04).
gonzalezmd (# Bik'it Bolom #) kusho
Ukuhlola ... Kubonakala kuyindlela enhle.
Phendula ku-gonzalezmd (# Bik'it Bolom #)
UMatias B kusho
Kuyamangalisa ukuthi i-Kingsonft Office inokuhambisana okungcono kwe-docx kune-LibreOffice, ngoba iLibreOffice isekelwa umphakathi omkhulu osusebenze isikhathi eside, futhi noma kunjalo ngeke ikwazi ukunqoba ukuhambisana kwe-MS Office.
Phendula uMatias B
Ngizamile izinhlamvu zokuqala futhi ngesizathu esifanayo zinamaphutha amaningi, kepha ngizozihlola manje ukuze ngibone ukuthi zithuthuke kangakanani
Kubukeka sengathi i-linux iba yiWindows.
Akunakulindelwa iqiniso lokuthi isoftware yamahhala, ukuthi umuntu anqume ukusebenzisa isoftware enamalayisense ngaphandle kwe-GPL kaMnu. Guru Richard yindaba yakho uqobo, ukuze kube lula ukuthandwa, futhi izinhlobo zezinhlobo zephukile. Ngisekela ihhovisi le-KS ngoba lenza ushintsho lwe-automation yehhovisi lube nobungane kakhulu, okukhohlwe yi-libreoffice 🙁
Hahaha, yehlisa umoya, akunankinga.
Kungaba yi-GPL, i-BSD, i-Linux, iWindows, i-MacOSX, i-FreeBSD ... inqobo nje uma isebenza futhi igcwalisa izicelo zami ezingenangqondo, ngiyayifaka.
Ngimane ngidinga i-MS office ka-2010 ukukhiqiza, ngakho-ke ngisebenzisa iwayini, empeleni ukuhlela amafayela akumafomethi we-MS. Uma ngiqale phansi kungashiwo ukuthi kungakuhle ukusebenzisa i-libreoffice ne-kingoft office okuthi ngombono wami kuyisikhuthazo esihle kubasebenzisi be-winbug ukushintshela ku-gnu / linux, okwamanje nginethemba lokuthi umhlaba weGaming I-PC ifudukela ku-gnu / linux nasehhovisi le-Kingsoft inguqulo ezinzile kakhulu ngeSpanish nangezichazamazwi.
Akunasidingo sokuchaza ukuthi kungani umuntu esebenzisa iWin.
Uma uyisebenzisa, ulungele nokuthi yini, ngiyayisebenzisa nezinkulungwane zabanye abantu. Anginakungabaza, labo abagcina iDebian, i-Gentoo, i-Slackware, njll. Basebenzisa i-Win up to MacOsx.
Manje uma ufuna ukuzibona ungumuntu oshisekela inkolo futhi ukhombe umunwe, qhuma labo abangacabangi njengawe ... nawe.
Ngeqiniso angilizwisisi iphuzu le-athikili, njengoba lingavumelani ngokuphelele nesihloko.
La maShayina awanabo ubuso uma kuyindaba yokukopisha! kuhle !!
ILibreoffice yinhle kakhulu, kepha ngiyithanda kakhulu ikhambi lehhovisi le-Kingsoft kangcono, yize ngithanda kakhulu izibalo ze-libreoffice futhi ngidweba izinhlelo, esingazitholi nakuNkk Office. Kungakuhle uma iKingsoft ingeze ukusekelwa kwefomethi ye-odf
Iyiphi incwadi ehhovisi le-wps engingayisebenzisa ukufaka ifonti ye-Arial?
Ezinyangeni ezedlule, ihhovisi le-Kingsoft selithuthukile, selivele liza nohlobo lweSpanishi nesichazamazwi sokubuyekeza ngeSpanish, yize idinga ukucwengwa okuncane kepha ithuthuke kakhulu.
Inkinga enginayo nje ukuthi ngoba ngingumfundi waseyunivesithi, ngidinga ukufaka izingcaphuno ze-bibliographic ku-APA Standard naseMicrosoft Office inginika leyo ndlela ekhuthaza ukuhlelwa kwalokhu kuqokwa, okudingeka eKinsoft Office, uma ungangeza , kungaba kuhle.
Ngisanda kufaka iWPS Ofifice futhi ngifisa ukwazi ukuthi inkampani ingayisebenzisa yini i-akhawunti yomuntu uqobo ngaphakathi kohlaka lwezomthetho?
Amaphilisi Abomvu ane-Cyanide, ingxenye yesi-4 neyokugcina: Ukudinwa Nokuthukuthela Okuthukuthelisayo